Original Posted Date : ၁၂-၁၂-၂၀၁၈
Modified Posted Date : ၁၂-၁၂-၂၀၁၈
ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC) ဖွဲ့စည်းပေါ်လာပုံ
မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု“စံ”သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့(NSSA)ကို ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၃)ရက်​နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၂၉/၂၀၀၇) ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အလုပ်အကိုင်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပေဒ ကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပေဒ အမှတ် ၂၉ အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ ၆.၆.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၆၀၄/ ၁/ အလည(လူအင်အား-၁) ၂၀၁၂ (၅၅၆၉) အရ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မ်မ(ACC) ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူ၍ သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနများမှ အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
NSSA ရှိ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီများမှ အာဆီယံ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အ‌သွေး မူဘောင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီရေးဆွဲထားသော အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များကို အသုံးပြု၍ လုပ်သားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအား အကဲဖြတ်စစ်ဆေး လျှက်ပါသည် ။
ACC အနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါ အသိအမှတ်ပြုအဆင့် ၄ ဆင့်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအား အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေး မျှော်မှန်းချက်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
အဆင့် ၁ - တစိတ်တဒေသကျွမ်းကျင်လုပ်သား(သို့) အခြေခံကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အဆင့် ၂ - ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အဆင့် ၃ - အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အဆင့် ၄ - အတတ်ပညာရှင် / ကြီးကြပ်သူအဆင့်
ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးကော်မတီ (ACC) ၏ တာဝန်များ
•အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် စစ်ဆေးမည့် “စံ” သတ်မှတ်ခြင်း။
•ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာနများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေး အစီအစဉ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
•မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း။
•အကဲဖြတ်ပုံစံသတ်မှတ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန များ၏ အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိရေးအတွက် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးစနစ်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား များ သတ်မှတ်ခြင်း။
•ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
•အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်၍ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ များ ပြုလုပ်ခြင်း။
•ပြိုင်ပွဲတွင် ထူးချွန်ပါက ထူးချွန်သူဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း။
ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Level of Skills)
Level(1) -Semi Skilled worker
ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်(၁) အခြေခံကျွမ်းကျင် လုပ်သား (သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
- ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအချက်များအား သိရှိ နားလည်ရမည်။
- လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကွက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံ လက်တွေ့ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းဗဟုသုတများ ရှိရမည်။
- ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင် ရမည်။
- လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား နားလည် သိရှိပြီး အသုံး ပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
- သတင်းအချက် အလက်များ လက်ခံခြင်း၊ မှတ်တမ်းထား ရှိခြင်း ဆောင်ရွက် တတ်ရမည်။
- လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိရမည်။
- ပေးအပ်သည့် သတ်မှတ်တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ လုပ်ကိုင် နိုင်ရမည်။
Level(2) - Skilled Worker
ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်(၂) ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
- လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် လုပ်ငန်း ဗဟုသုတ များ ရှိရမည်။
- အလုပ်ဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ အခြေခံဆောင်ရွက်မှု ဗဟုသုတနှင့် လုပ်ငန်း အချက် အလက်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများရှိရမည်။
- အဆင့်မြင့်သော လုပ်ငန်းလုပ်ကွက်များကို လုပ်ကိုင် နိုင်ရမည်။
- သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Level(3)- Advanced Skilled Worker
ဘက်စုံကျွမ်းကျင်လုပ်သား(သို့)အဆင့်မြင့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်-၃)
- လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတွေးအမြင် ဗဟုသုတရှိရမည်၊
- လုပ်ငန်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ဆောင်ရွက်နိုင် သော ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်း ရှိရမည်၊
- လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်၊
- လုပ်ငန်းတွင်းမှ ရရှိလာသော သတင်းအချက်အလက် များကို အသုံးပြုလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်၊
- လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အခြားသူများကိုလည်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။
Level (4) -Supervisory
-လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ပြန့်သော ဗဟုသုတရှိပြီး မိမိ၏ အတွေးအမြင် ခံယူချက်များအား အသုံးချ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်၊
- လုပ်ငန်းပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဗဟုသုတများကို ခွဲခြားသိရှိ အသုံးပြု ဆောင်ရွက် နိုင်ရမည်၊
- သတင်းအချက်အလက်များအား ခွဲခြားစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်၊
- လုပ်ငန်း၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ကိစ္စရပ်များကို နားလည်သိရှိကာ တာဝန်ယူလုပ်ကို င်နိုင်ရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့မှ
အလုပ်အကိုင်အလိုက် အသိအမှတ်ပြုပြီးသည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ
သတ္တုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
သံရည်ကျို ပုံသွန်း/ ပုံလောင်း (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)
သံရည်ကျို ပုံသွန်း/ ပုံလောင်း (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၂)
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
Bell Person (ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်-၁)
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
သစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
မွေးမြူရေးနှင်ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ
No.298, Myanandar Street, (13) Ward, Yankin Township, Yangon
Corner of Min Ye Kyaw Swar Street & Bo Min Yaung Street, 43 Ward, North Dagon Township, Yangon
No.674, 36th Quarter, Pinlone Street, North Dagon Township, Yangon
No.42, Stand Road, Second Floor, Myanmar Red Cross Building, Botataung Township, Yangon
Satsae Village, ThanPhyuZayat Township, Mon
H-250, Industrial Zone -2, Kanaungminthargyi Street, Between 47x48, Pyigyi Takhon Township, Mandalay
Thu Kha Su San Training Center
Kyan Sit Thar Street, No.6 Ward, Hlaingtharyar Township, Yangon
SMVTI Vocational Training Institute
(123), Nat Mauk Road, Bahan Township, Yangon.
Thagaya Industrial Complex Yadashe Township, Bago Region
29 Ward, Myawuttyi Street, Thuwunna, Thingangyun Township, Yangon
Htet Oo Training Center, Htet Oo Co.,Ltd
No(24), Nawaday Street Industrial Zone(3), Hlaing Thar Yar Township
01-685382, 01-685430 (fax)
Myanmar Construction Entrepreneurs Association (Mandalay Region),
MCEA (Mandalay Region)
80 Road, 26 x 27 Best Street, Chanayetharzan Township, Mandalay
Community Vocational Training Center (CVTC)
Kayin Chaung Village, Thayet Chaung Township, Tanintharyi Region
32 Ward, Myawuttyi Street, Thuwunna, Thingangyun Township, Yangon
31 Ward, Myawuttyi Street, Thuwunna, Thingangyun Township, Yangon
Htet Oo Training Center
Htet Oo Co.,Ltd
Bld-209, Room-101, Kabaraye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon
Star Resources Tourism & Hospitality Management Academy
No.267,Pyay Road, San Chaung Township, Yangon
Thiri Yadanar Market, ThuDaMa Street, North Okkalar Township, Yangon
Theikpan Street, Between 66 x 68, Mahar Aung Myay Township, Mandalay
Inle Heritage Hospitality Vocational Training Center npawkhone Village, Inle, Nyaung Shwe Township, Southern Shan State
Corner of Kyite Thote Pagoda & Kan Nar Street, Mawlamyine, Mon
No.9/10, Yarzar Thingaha Street, Datkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw
Yarzar Thingaha Street, Hotel Zone (1), Datkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw
Chaung Thar Village, Pathein, Ayeyarwady Division, Myanmar
No. 72, Mahar Bandula Street, Pathein, Ayeyarwaddy division
MHTi M Hospitality & Tourism Institute
No.(647), MyaKan Thar 1st st, 5.5 miles, Pyay Road, Kamaryut Township
Amazing Academy (Bagan)
Hospitality and Catering Training Academy (HCTA)
No.(61), Ma Gyee Kan Village, Kawhmu Township, Yangon.
No.6, Botahtaung Jetty (near Botahtaung Pagoda), Seik Kan Tsp; Yangon
Inle Heritage Hospitality Vocational Training Center
Inpawkhone Village, Inle, Nyaung Shwe Township, Southern Shan State
Hpa-an Lodge Hotel
Hpa-An- Zwekabin Main Road, Hpa - An, Kayin State
Amazing Academy (Chaung Thar)
No.520, 4A, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon
Mahar Bandula Street, Pathein,Ayeyarwaddy division
Kabar Training Center
No.41, 6th Street, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township, Yangon
No.2964, (J+K)Satmu Street, 63 Block, Industrial Zone (2), South Dagon Township, Yangon
No.84, Pan Hlaing Street, Sanchaung Township, Yangon
No.2, Industrial Training Center(Mdy), Dawnaphwaryat, Aungmyaytharzan Township, Mandalay
No.4, Industrial Training Center(Pkk), Chauk Kan Village, Pakokku, Magway
No.1, Industrial Training Center(Sinde), Padaung Township, Pyay, Bago
No.6A, Let Yar 4th Street, North Ward, ThaKeta Township, Yangon
No.5, Industrial Training Center(Magway),Magway
Automotive Technology Research Institute (Pyin Oo Lwin)
Corner of MaharBandula Street & Circular Road, Pyin Oo Lwin
No.3, Industrial Training Center (Thargaya), Yay Tar Shay Township, Bago
Mechanical Circle(1) TrainingCenter & Foundry Shop(Mhiwbi) MOALI
Mechanical Circle (1), Training Center and Foundry Shop
Department of Irrigation and Water Utilization Management, Yangon
Sea Lion - Festo Industrial Automation
No.113, Botahtaung Pagoda Road, Botahtaung Township, Yangon
School of Industrial Training and Education (SITE)
No.123, Nat Mauk Lane (1), Bo Cho (2) Ward, Bahan Township Yangon
Meiktila Agricultural Mechanization Department, Mechanization Training Center, Meikhtila, Mandalay
Aung Myin Hmu Garment Skills Training Center (North Dahon)
Pin Lone Hall, North Dagon Township Yangon,
No.182, Makhayar Minthargyi Maung Pyo Street, Industrial Zone (2), Hlaingtharyar Township, Yangon
Myanmar Garment Human Resource Development Center
No.400B, Lower Mingalardon Road, Sintgu Ward, Insein Township, Yangon
Garment Factory(Taung Thar)
No.10, Garment Factory, Taung Thar, Myin Chan Township, Mandalay
Lat War (Yae Ni)
Yae Ni, Yay Tar Shay Township, Bago
No.3, Branch of Garment Factory, Sagaing
No.6,Garment Factory, Sarlingyi, Moneywar Township, Sagaing
No(51) Ward, Myawaddy Mingyi road, North Dagon Township, Yangon
Bogart Lingerie (Yanon) Ltds
NO.90, Ayawaddy Street, Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Thayar Township, Yangon.
Plot No.20, Special Zone2Okkthar Ward 9, Bagon Township, Bagan Region.
No. (6A/B) , Ingyin Road, Nyarna Quarter, Pale Myothit, Mingalardon Township, Yangon
Eurogate Sportswear Ltd
473 (A-3) , 23 BLk, Moegoke st, sorth Dagon, Industrial Zone -1 , Sorth Dagon
Today Top Star
No.3 , Chinwin Street, Thingunkyun Kyi Quarter Mingaladon Township , Yangon Division
No.298, Myanandar Street, (13) Ward, Yankin Township, Yangon.
Mechanical Circle (1), Training Center and Foundry Shop Department of Irrigation and Water Utilization Management, Yangon
Machinery Operators Training School
East Kan Pyar Village, Magway Township, Magway
Myan Shwe Pyi Tractors Limited Learning Center, Yangon
No.101, Corner of No(3) Main Road & Baydar Street, Pale Myothit, Mingalardon Tsp, Yangon.
Machinery Operators Training School(Ygn),Myanmar Kaido Co.Ltd
No.242/243, Dipe Yinn Wun Htauk U Mye Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar Township, Yangon
Ruber Latex Harvesting
Perennial Crops Research and Development Estate, Mudon Department of Agriculture
Perennial Crops Research and Development Estate (Mudon)
No.(2964), (J+K), Setmu Road, (63)Block, Industrial Zone (2), South Dagon Township, Yangon.